बिष्णु माझी जस्तै दुरुस्त स्वर भएकी गायिका को आगमन : भिडियो सहित ! – Complete Nepali News Portal
बिष्णु माझी जस्तै दुरुस्त स्वर भएकी गायिका को आगमन : भिडियो सहित !
ScotNepal May 26, 2018
इतिहासमै पहिलो पटक बिष्णु माझीको दुरुस्तै आवाज भएकी सुमुधुर स्वर भएकी गायिका सिता श्रेष्ठको प्रबेस, इज्जत गीतमा उनको आवाज सुन्नको लागी तलको भिडियो हेर्नुहोला ।
हरेक भिडियोमा नयाँपन र आफ्नोपन दिन सिपालु निर्देशक सिर्जन बरालले फेरी अर्को उत्कृष्ट भिडियो बजारमा ल्याएका छन । ईज्जत बोलको नयाँ लोकदोहोरी गितमा चर्चित मोडल सगुन शाहीसंगै अर्का उदायमान मोडल किशोर खत्रिको भुमिकालाई फरक भुमिकामा देख्न सकिन्छ ।
त्रिकोणत्मक लभस्टोरमिा तयार भिडियोमा सुजन कोईरालाको काम पनि तारिफयोग्य छ । सुरेश रमण अधिकारी र सिता श्रेष्ठको स्वरमा सुसज्जित गितलाई दिलिप लामाले लेखेका हुन भने सुरेश रमणले नै संगित भरेका हुन । रेशम दर्लामीले खिचेको भिडियोमा प्रदिप दहालको सम्पादन रहेको छ ।
हेर्नुहोस उक्त भिडियो सारै मिठो गित ।